ယိုယွင်းနေသည့် အောင်ဆန်းကွင်းကို ငှားရမ်းထားသူထံမှ ပြန်လည်ရယူပြုပြင်ပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်မှစတ? - Yangon Media Group
ယိုယွင်း နေသည့် ရန်ကုန်မြို့ အောင်ဆန်းကွင်းကို ငှားရမ်းထားသူထံမှ ပြန်လည်ရယူပြုပြင်ပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများကို ပြန်လည်ကျင်းပတော့မည်ဟု ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ပြောသည်။ အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေလှ (ခ) ဦးရွှေလှဝင်းက တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများကို ရန်ကုန်မြို့ တွင် နှစ်စဉ်ပြန်လည်ကျင်းပရန် အစီအစဉ်ရှိ မရှိမေးမြန်းမှုအပေါ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ယင်းသို့ပြောကြားပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”အောင်ဆန်းကွင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့သုံးလေးလလောက်က နှစ်ခေါက်ရောက်ပါတယ်။ အထဲမှာကြည့်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သိပ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဘောလုံးကွင်း နေရာကော၊ ပတ်လမ်းတွေကလည်း တော် တော်လေး ယိုယွင်းပျက်စီးနေတာတွေ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ ဒါကို သူတို့ဆီက နှစ်သုံးဆယ်စာချုပ်နဲ့ ငှားရမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ကျွန် တော်တို့ ပြန်ယူပါမယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ကို တစ်ဆင့်တင်ပြပြီးတော့ယူပါမယ်။ ယူပြီး တော့ ဒါကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မှာပါ။ ဒါမှ သာ ကစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ ဘတ်ဂျက်လျာထား တောင်းခံမည်ဖြစ်ပြီး ဘက်ဂျက်ရမယ်ဆိုရင် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဘောလုံးအားကစားပွဲများကို ရန်ကုန်မြို့မှာ လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောသည်။ မြန်မာဘောလုံးအားကစားမြင့်မား စဉ်ကာလ ၁၉၆၈ ခုနှစ်ကာလပိုင်းက မြူး နစ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ၌ အသန့်ရှင်းဆုံးဆု၊ အာရှ ချန်ပီယံ၊ မာဒေးကားဖလား စသည့်ဆု များရရှိခဲ့ကာ ယင်းပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်သည့် ဘောလုံးသမားများမှာ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများမှ မွေးထုတ်ပေးခဲ့သူများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ များကို ၁၉၅၂ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ အောင်ဆန်းကွင်း၌စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ပထမဦးဆုံးချန်ပီယံမှာ ရှမ်းပြည်နယ်အသင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ”လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ မြန်မာနေရှင် နယ်လိဂ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို ပြည်သူများ စိတ်ဝင်စားမှုအလွန်နည်းပါးတာကို ပွဲကြည့် ပရိသတ်ကိုကြည့်ရှုပြီး သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့ ယခုပြု လုပ်နေတဲ့ နယ်မြို့ကြီးတွေမှာ အိမ်ကွင်း အ ဝေးကွင်းပုံစံကျင်းပပြီး တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုတော့ ရန်ကုန် မြို့မှာပဲ အမြဲတမ်းကျင်းပရင် သင့်တော်မယ် လို့ယူဆမိပါတယ်”ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေလှဝင်းကပြောသည်။
သုံးနားညီ တြိဂံကို ကောင်းကောင်း ရေးဆွဲနိုင်သော ဆရာများ ဖြစ်ကြပါစေ
အာရှအမျိုးသမီး ချန်ပီယံရှစ် ခြေစစ်ပွဲအတွက် သြစတြေးလျတွင် မြန်မာယူ-၁၆ အမျိုးသမီးအသင်း လေ့က??
‘ဆိုးတဲ့ ကာရိုက်တာ ရိုက်ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မှု မရှိပါဘူး’ ထွန်းကိုကို
‘တိုးကျော်မန်းနဲ့ နန်းဆန်တဲ့ရွာ’ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှု အတွေ့အကြုံကို ပြောပြတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်